राेचक खबर Archives - itaharinews
कोरोना रोकथामका लागि भन्दै पास्टरले पिलाइदिए डिटोल !
एक क्रिस्चियन पास्टरले चर्चका विश्वासीहरुलाई कोरोना भाइरस रोकथामका लागि भन्दै केन्यामा डिटोल पिलाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन थालेपछि पास्टर रुफुस फालाले मक्गोदुस्थित एके स्पिरिचुअल चर्चमा आएका विश्वासीहरुलाई घरेलु किटाणु नासक डिटोल पिलाएका हुन् । सोही घटनापछि दक्षिण अफ्रिकामा ५९ जना मानिसको मृत्यु भएको थियो । साथै चारजनाको अवस्था गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ ...
मिसकलबाट माया बसेपछि २० वर्षका युवकले ६० वर्षकी महिलासँग बिहे गरे !
काठमाडौं। बिहेको विषयमा कुरा गर्दा केटा र केटीको उमेरको अन्तरलाई महत्व दिइन्छ । सामान्यतया केटाको उमेर केटीको भन्दा केही बढी भएको पाइन्छ । कहिलेकाहीँ केटीको उमेर पनि थोरै बढी हुन सक्छ । तर, ४० वर्षको उमेर अन्तर भने सामान्यतया स्वीकार गरिँदैन । भारतको मुरादाबादको रामपुरमा भने २० वर्षका एक युवकले ६० वर्षकी महिलासँग बिहे गरेका छन् । रामपुरको सैदनगरमा भएको यो विवाहका विषयमा त्यस क्षेत्रमा निकै चर्च...
दुई श्रीमतीले गरे श्रीमानको बाँडफाँटस् ३ दिन जेठीसँग, ३ दिन कान्छीसँग, १ दिन छुट्टि !
एजेन्सी – भारतमा एक पुरुषको श्रीमती र प्रेमिका बीच बाँडफाँट भएको छ। हप्ताको ३ दिन श्रीमती र ३ दिन प्रेमिकासंग बस्ने गरी एक पुरुषको बाँडफाँट भएको हो। भारतको झारखण्डको राजधानी राँचीको सदर पुलिस थानामा एक पुरुषका श्रीमती र प्रेमिकाबीच बाँडफाँटको सहमति भएको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन्। प्रेमिकाको चक्करमा श्रीमान घर आउनै छाडेपछि श्रीमतीले प्रेमिकासंग प्रहरीको उपस्थितिमा सहमति गरेको बताइएक...
यसरी बन्न सकिन्छ सासुको प्यारी बुहारी !
काठमाडौं– पुरातन नेपाली समाजमा मात्र होइन भारतीय र पश्चिमा समाजमा पनि सासु बुहारीको बेमेल सामान्य कुरा थियो । तर अहिले त्यसमा परिवर्तन आएको छ । सासु र बुहारीबीचको सम्बन्ध पछिल्लो समयमा सुधार आएको पाउन सकिन्छ । तर सासू बुहारीबीचको सम्बन्ध छोरी र आमाको जस्तो भने बन्न सकेको छैन । नेपाली समाजका धेरै परिवारमा अहिले पनि सासू र बुहारीबीचको सम्बन्ध राम्रो बन्न सकेका पाइँदैन । कुनै घरमा सासूका कारण त...
एजेन्सी– पति पत्नीबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ । अझ पति–पत्नीलाई एक रथको दुई पांग्राको संज्ञा पनि दिइन्छ । घरबार बिग्रिन नदिँन समाजमा आ–आफ्नै नियम बनाइएका हुन्छन् । संसारले समेत त्यसलाई बाँधेको हुन्छ । छिमेकी मुलुक चिनमा पनि एउटा अनौठो नियम छ । अर्काको पति वा प्रेमीसँग कुनै महिलाले अनैतिक सम्बन्ध राखेमा उसलाई सार्वजनिक ठाउँमा निवस्त्र बनाइ बेइजेत गरिन्छ । हालै मात्र चीनको श्याङडोङ प्रान्तस्...
रिस किन उठ्छ रु यसरी गर्नुस् नियन्त्रण !
काठमाडौँ । रिस वा क्रोध वास्तविक वा काल्पनिक जीवनको संघर्ष वा दुःखको निम्ति प्रतिक्रिया हो । यसको उत्पति थलो विगत वा वर्तमानका अनुभवसँग गाँसिएको हुनसक्छ भन यो भविष्यको स्वप्निल योजनासँग पनि जोडिएको हुन सक्छ । सामान्यतया रिसराग भनेको डरको अवधारणाले विकास भएको अवस्था पनि हो । जब केही सोचेको लक्ष्य वा कार्य पूर्ण हुँदैन तब हामी निराश हुन्छौँ भने हामीलाई त्यतिकै रिस उठ्छ । रिस एउटा भावनात्मक संवेग ...
दुलहीको डोली हरायो !
रुकुमपूर्व । एकदशक अघिसम्म रुकुम पूर्वका गाउँमा हुने बिहेवारीमा दुलहीलाई डोली चढाएर भित्र्याउने चलन अहिले देख्न पाइँदैन । त्यतिबेला हरेक टोलमा एउटा डोली हुने गरेकोमा अहिले जिल्लाभर खोजे पनि भेटिँदैन । पछिल्लो पुस्ताले त डोली कस्तो हुन्छ भन्नेसमेत थाहा पाएका छैनन् । विसं ०६५ मा सिस्ने गाउँपालिका–५ की रीता बस्नेतले विवाहका बेला बेहुला पक्षले आफूलाई लिन रातो कपडाले सजाएको डोली ल्याएर आएको बिर्सीएक...
यी व्यक्तिलाई मार्न दुश्मनले खर्च गरे २५ अर्ब, केका लागि पानीझैं बगाए पैसा ?
एजेन्सी। संसारका सबैभन्दा खुंगार ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबरकी पत्नीले अहिले एक खुलासाले संसारलाई चकित बनाएकी छिन् । उनका अनुसार पाब्लोका दुश्मनले पाब्लोलाई मार्नको लागि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम खर्च गरेका थिए । करिब २ दशक पहिले संसारभर अण्डरवल्र्डमा ड्रग माफिया पाब्लो एमिलियो एस्कोबार ग्याविरियाको नामको सिक्का चल्थ्यो । उनी संसारका सबैभन्दा धनी र खतरनाक ड्रग माफिया थिए जसलाई प्रहरी इन्काउन्टरमा...
आइतबार, कार्तिक १८, २०७५
नयाँ फोन किनेर पुरानो छोरीलाई खेलाउन दिइन्, ६ महिनापछि छोरीको कर्तुतले होस उड्यो !
एजेन्सी । चीनमा एक महिलाले नयाँ मोवाइल फोन किनेपछि पुरानो फोन ११ वर्षकी छोरीलाई खेलाउन दिइन् । त्यस बेलादेखि त्यो फोन छोरीको खेलौनाहरुको एक हिस्सा बन्यो । छोरी दिनहुँ त्यो फोन खेलाउँथिन् । आमाबाबुले छोरीले फोनमा के गर्दैछिन् भन्नेतर्फ चासो दिएका थिएनन् । ६ महिनापछि उनीहरुलाई थाहा भयो कि छोरीले फोनमा के गर्दिरहिछिन् । छोरीको कर्तुतले उनीहरुको होसहवास उडेको छ । घटना हुबेइ प्रान्तको जिंगझोउ सहरको हो ...